Panogona kuita bonde here kana pasina kupinda? | Bezzia
Panogona kuita bonde here kana pasina kupinda?
Maria Jose Roldan | 08/04/2021 04:59 | Zvepabonde
Kusvikira zuva ranhasi, kutenda kwakakurumbira kuchiripo kuti kana pasina chekupinda, hapana bonde. Izvo zvakakosha kuisa parutivi maonero akadaro uye kufunga kuti kune bonde kana paine kubatwa, bonyora kana bonde remukanwa pakati pevanhu vaviri.
Iwe unofanirwa kuve uine yakawanda yakavhurika pfungwa uye kanganwa nezvekuti kune bonde chete kana murume achikwanisa kupinza mukadzi panguva yebonde. Muchinyorwa chinotevera tinokupa makiyi ekuona kuti panogona kuita bonde kunyangwe pasina chekupinda.
1 Panogona kuita bonde kana pasina pekupinda
2 Kuoma kwepabonde
3 Kudzidziswa patsva
Panogona kuita bonde kana pasina pekupinda
Neraki kune vakawanda uye vanoziva vanhu vanofunga kuti panogona kuita bonde kunyangwe kupindwa nemunhu kusingaitike. Kufunga uku kunoitika zvakanyanya muvakadzi kupfuura kuvarume. Munhu anogona kunakidzwa nehupenyu hwepabonde husingaite kunyangwe hazvo pasina chero rudzi rwekupinda.
Dzidzo yakashata yepabonde inogamuchirwa inoita huwandu hukuru hwevanhu, kupinda kwepenisikuru mukati memukadzi kunonzwa kunge chinhu chakamanikidzwa kunzi bonde. Iyi fundo inopa hukuru hukuru kumafaro evarume kupfuura ayo evakadzi, saka inogona kutariswa semeso chaiwo.
Icho chokwadi chekuti bonde rakadzikiswa kupinda mukati zvakare chine chekuita neruzhinji maonero ekuti vanhu vanofanirwa kuita bonde. Ramba uchifunga kuti bonde rakanyanya kuomarara uye panogona kuzara uye nekugutsa tsika dzebonde pasina kupinda kana orgasm. Kuita bonde hakufanirwe kudzikisirwa kuchokwadi chekuisa nhengo yemurume mukati memukadzi.
Kiyi yeizvi zvese inofanirwa kutsvaga mumaonero evakadzi. Kune ongororo dzakawanda dzinoratidza kuti vakadzi vanosarudza kuita bonde kunze kwekupinda. Kashoma kuti mukadzi anakirwe nebonde kana akangopindirwa nemurume. Ivo vanoda imwe nhevedzano yezviitwa kuti vakwanise kufara uye kunakidzwa panguva yekuita bonde.
Tichifunga izvi, zvakakosha kuti ukwanise kudzidzisazve munharaunda yebonde vese vakadzi nevarume. Vanhu vanofanirwa kuziva nguva dzese dzehukuru hwekugona pabonde hunowanikwa nevanhu. Bonde hakusi kungopinda uye kune dzimwe nzira dzakawanda dzekunakidzwa pamubhedha pasina kupinda. Kusvikira kudzidziswa kwakadai kwaitika, vanhu vazhinji vacharamba vachifunga kuti bonde rinoitika chete kana paine kupinda. Izvo zvakakoshawo kwazvo kuti muve nekutaurirana kwakanaka nevaroorani kuti mukwanise kutaura zvinhu pasina chero rudzi rwekusununguka uye kuziva kuti vanhu vaviri vanonakidzwa zvakadii pamubhedha.
Muchidimbu, zviri pachena kuti kune bonde, kupindwa nemunhu hakudi. Zvepabonde zvakafara uye pane nzira dzakawanda dzekunakidzwa pamubhedha nemumwe wako, kunyangwe pasina kupinda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Psychology uye vaviri » Zvepabonde » Panogona kuita bonde here kana pasina kupinda?
Mabhuku mashanu ezvechikadzi zvakaburitswa mugore rapfuura
Kudya zvidhori kunoshanda here?